Laser Aesthetic, milina hatsaran-tarehy, fitaovana laser fitsaboana - mpamatsy
Cryolipolysis milina fatiantoka mavesatra
milina EMSlim Body Sculpt
milina fanandratana RF
System Analyzer hoditra
Slide teo aloha◀︎
Tongasoa eto amin'ny KR LASER
KR LASER dia manokan-tena hanolotra vahaolana tokana momba ny hatsaran-tarehy ara-pitsaboana ho an'ny mpanjifa Salon, Hopitaly, Clinics. Manana milina fanalana volo 808nm Diode Laser izahay, milina Coolsculpting, milina HIFU, milina fanesorana hala 980nm diode laser, milina Intense Pulsed Light (IPL) ho anao.
Manana ny sampana Fikarohana sy Fampandrosoana manokana izahay, ny ekipan'ny orinasa tanora manana fahombiazana ambony, mpaninjara any ivelany ary departemanta aorian'ny varotra.
Misy vahaolana foana ny olanao!
Scars amin'ny akne
Machine Laser Picosecond
Ny milina Laser Picosecond dia vahaolana tsara tarehy mahasalama sy azo itokisana ho an'ny Choasma, Age spot, Nevus ...
Mahazoa teny iray
Q Switched ND YAG Tattoo Removal Machine Laser
Ny Q Switched ND YAG Tattoo Removal Laser Machine dia vahaolana tsara tarehy mahasalama sy azo itokisana ho an'ny Rem ...
Q Switch Nd YAG Tattoo Removal Machine Laser
Fitsaboana Theory Mandray ny fipoahan'ny hazavana, Super Picosecond Laser&......
Ny 1200W Diode Hair Removal Machine dia vahaolana tsara tarehy mahasalama sy azo itokisana ho an'ny h ...
Fitsaboana Theory Diode tamin'ny laser fitaovana mampiasa 808 nm, 755nm ary 1064nm, indrindra ......
Telo amin'ny iray Multifunction Machine
Teolojian'ny fitsaboana SHR: SHR na Super Hair Removal dia teknolojia somary vaovao kokoa......
Fitsaboana Theory Multifunctional Workstation dia fikarakarana tarehy feno sy mahomby ......
Ny Co2 Fractional Laser Machine dia vahaolana tsara tarehy mahasalama sy azo ianteherana ho an'ny fanavaozana ny hoditra sy ...
Ny 6D Cryolipo Laser Shape System (Nov-invasive 6D Laser Slimming Equipment) dia salama, azo antoka ...
High Intensity Electromagnetic Hozatra vatana sculpting tavy fandoroana hozatra fanorenana milina
Fitsaboana Theory Coolsculpting & Muscle Training CoolSculpting a non-invas......
Milina Ultrasound 7D HIFU Mifantoka amin'ny Portable
The Portable 7D HIFU Focused Ultrasound Machine dia vahaolana tsara tarehy mahasalama sy azo itokisana ho an'ny tarehy l...
Ny 980nm Surgical Diode Laser Machine dia vahaolana hatsaran-tarehy mahasalama sy azo itokisana ho an'ny lesoka Vascular ...
Ny Super Picosecond Nd YAG Laser Machine dia vahaolana tsara tarehy mahasalama sy azo itokisana ho an'ny Esory ny k...
Fanohanana amin'ny serivisy feno
Eto izahay hanampy amin'ny dingana rehetra amin'ny fampitomboana ny fanaonao.
Manome OEM&ODM, fiofanana, fanohanana ara-teknika, ary manome serivisy fikojakojana feno.
Factory mivantana. Ny politika fanohanana vidiny tsara indrindra dia hahatonga anao ho matanjaka kokoa.
Ny ekipa mpanohana ara-teknika 24/7 dia ho vonona ara-potoana hanao vahaolana ara-pitsaboana tonga lafatra ho anao.
Mitady fiaraha-miasa amin'ny mpandraharaha maneran-tany hatrany izahay. Manasa anao amin-kitsimpo mba ho isan'ny mpikambana ao amin'ny KR LASER Family.
Fijoroana vavolombelona mpanjifa
Mitady ny marary tsirairay aho mba hotsaboina amin'ny fikarakarana tsara indrindra, ary ny fitsaboana tsirairay dia miteraka endrika tsara tarehy sy voajanahary. Ny laser KR no rafitra tsara indrindra hanesorana ireo tatoazy tsy ilaina amin'ny karazana hoditra rehetra miaraka amin'ny fiarovana sy ny fahombiazany.
Efa ela aho no nanao fanalana tombokavatsa miaraka amin'ny rafitra Q-switched Nd:YAG, saingy nahatsikaritra ny fitomboan'ny marary manana tombokavatsa miloko. Te-hiantoka ny hahazoan'ny marary ahy ny vokatra tsara indrindra aho, na inona na inona lokon'ny ranomainty nasehony, ka izany no antony nisafidianako hampiditra ny laser KR amin'ny fanaoko. Nahita valiny mahavariana momba ny ranomainty tsy misy dikany izahay.
Ny tanjonay dia ny hanao fitsaboana izay manome vokatra tsara ho an'ny marary rehetra. Ny KR Laser dia nanampy ny maro tamin'ireo marary anay hahita vokatra mahatalanjona, ary tena faly izahay nisafidy ity teknolojia faran'izay haingana ity ho an'ny fitsaboana rehetra amin'ny fanesorana tombokavatsa.
KR LASER dia naorina tamin'ny 2008. Ny orinasa dia ao Beijing, Shina. Izy io dia mpanamboatra matihanina mitombo haingana. Isika dia mifantoka indrindra amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny fitsaboana tamin'ny laser fitaovana hatsaran-tarehy.
Trano No.2, Laharana No.1, Lalana No.2, Wuliqiao, Distrikan'i Chaoyang, Beijing, Sina
Huochetou Industry Park, 12 Oufu Rd. Yanjiao, East Beijing, Sina
Mampiasa Cookies ity tranokala ity hanatsarana ny traikefanao amin'ny fitetezana sy hanampiana amin'ny varotray.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fanesorana Cookies eto: politika fiarovana fiainan'olona
Miombon-kevitra amin'ity politikan'ny fiainana manokana ity aho
Mahazoa Quote avy hatrany
Ilaina ny entana misy marika *
Eny, tsara kokoa raha fenoinao ity, ilaina izany. Eny, tsara kokoa raha fenoinao ity, ilaina izany. Eny, tsara kokoa raha fenoinao ity, ilaina izany.
Eny, tsara kokoa raha fenoinao ity, ilaina izany.